News | निर्वाचन
News | Tag: निर्वाचन
राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आज प्रकाशन हुँदै
काठमाडौँ । आगामी माघ ९ गते सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छैनन् । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बिहीबार मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने कार्यक्रम भए पनि कसैले पनि नाम फिर्ता नलिएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, पुष २० गते उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार पुस १७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । विभिन्न दलका १८ जना सदस्यको पदावधि सकिने भएपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरेको थियो ।
स्व. रवीन्द्र अधिकारीकाे निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता सूची अद्यावधिक गरिने
कास्की क्षेत्र नं. २
पोखरा । कास्कीको संसदीय क्षेत्र नं. २ मा असोजको पहिलो सातामा मतदाता सूचीको अद्यावधिक कार्य हुने भएको छ । सो क्षेत्रमा मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने भएकाले असोज १ देखि ७ गतेसम्म मतदाता सूचीको अद्यावधिक गर्न लागिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
उत्तर कोरियामा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ९९.९८ प्रतिशत मतदाता सहभागी
प्योङयाङ । प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर कोरिया) मा आइतबार स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रान्त, शहर तथा जिल्लास्तरीय नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ बजेदेखि मतदान शुरू भै दिनभर मतदान भएको उत्तर कोरियाली राज्य सञ्चालित समाचार संस्था (केसीएनए) ले जनाएको छ । मतदानमा झण्डै ९९.९८ प्रतिशत मतदाताले सहभागिता जनाएका केसीएनएले जनाएको छ ।
निर्वाचन भएकाे दुई वर्षपछि सहमतिमा टुंगियाे चुनावी मुद्दा
सिञ्जा । चुनावी मतगणनामा शङ्का लागेर जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा सहमतिमा टुङ्गिएको छ । वि.सं. २०७४ जेठ ४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनामा शङ्का लागेर एमालेबाट जुम्लाका हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार भैरवबहादुर रोकायले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मतगणनामा तत्कालीन माओवादीबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको थियो ।
रिक्त स्थानमा चैत बैशाखभित्र निर्वाचनकाे तयारी गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा आगामी चैत वैशाखभित्र निर्वाचनको तयारीका लागि वातावरण बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन १२ दिनपछि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा मातहतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन १२ दिन पर धकेलिएको छ ।	प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले यही भदौ ५ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति विशेष कारण भदौ १७ गते आइतबारका लागि सारिएको जानकारी दिए ।
पाकिस्तानको निर्वाचन तालिका परिवर्तन
इस्लामावाद । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पूर्वघोषित निर्वाचन तालिका परिवर्तन गरेको छ ।